Andriamifidisoa Zo · Desambra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Desambra, 2018
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Desambra, 2018
Mediam-bahoaka 29 Desambra 2018
Ataon'ny Serba mpisera aterineto fanalana hamohamo ny fandisoam-baovaon'ny mpanohana ny governemanta
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Desambra 2018
Mitatitra fandisoam-baovao ny fampahalalam-baovao ao antoerana amin'ny halalina sy velaran'ny hetsi-panoherana ny Serba mpiserasera aterineto sy manampahaizana manokana amin'ny fampitam-baovao. Ireny tatitra mivilana ireny avy eo no miteraka fironam-pihetsika malaza vetivety ao amin'ny media sosialy.
Azia Atsinanana 28 Desambra 2018
Matetika ny demony miditra ny trano hampatahotra ny ankizy mandra-pampitoniana azy amin'ny sake. Amin'ny endrika hafa amin'ny fombafomba, mihaza (mandroaka) ny ankizy eny an-dalambe ny demony hampatahotra azy ireny.
Mediam-bahoaka 22 Desambra 2018
Manolotra ny toetran'ny Lingua oktobra 2018 ny mpitantana ny Lingua
100 andro ho an'i Alaa: Isain'ny fianakaviana ejipsiana ny andro mandra-pamotsotra azy avy any am-ponja
Ejipta 22 Desambra 2018
Na nogadraina na nanaovana famotorana i Alaa nandritra ny androm-piainany isaky ny misy filoham-panjakana hafa Ejipsiana.
Vehivavin'i Oaxaca mianatra ny fahaizana fototry ny sary hanoritan-joro indray ny fiainany
Amerika Avaratra 20 Desambra 2018
Nandritra ny faran'ny herinandro tamin'ny Novambra 2018 ny tanora zazavavy miisa 25 avy ao Oaxaca no nianata ny teknikan'ny saripika avy amin'ny mpampiofan'ny Mozean'ny Zavakanto ara-saripika.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 18 Desambra 2018